Laser Cutter Flatbed - MimoWork
Akanjo sy lamba ao an-trano
Doka sy fanomezana
Ny vahaolana amin'ny laser
Fanamarihana Laser GALVO
Rafitra ekena Mimo Contour
Rafitra fanekena fakan-tsarimihetsika CCD
Rafitra fampifanarahana modely
Momba an'i MimoWork
Fahalalana amin'ny laser
FOMBA FANAVOTANA INTELLEGENT MIMOWORK HO AN'NY MPANAO
Ampifanaraho amin'ny rindranasao, ny mpandahatra laser laser misosa mafy dia miantoka kalitao ho an'ireo fangatahana mitaky be indrindra. Ny endrika X & Y gantry no rafitra mekanika miorina sy matanjaka indrindraizay miantoka ny vokatra fanapahana madio sy tsy tapaka. Ny fanapahana laser tsirairay dia afaka mahaymanamboatra fitaovana isan-karazany.
Hizaha ny fanapahana laser rehetra
Ny maodely fanapahana laser malaza indrindra
CO2 Flatbed Laser Cutter 160
Ny MimoWork's Flatbed Laser Cutter 160 dia ny fanapahana laser ambaratonga fidirana miaraka amina latabatra miasa iray izay natao indrindra hanapahana ireo fitaovana horonan-taratasy malefaka toy ny lamba, hoditra, dantelina, sns. manampy anao hanangona mora foana ny tapa-fanapahana. Ankoatr'izay, safidy roa-laser-loha sy efatra-laser-loha no misy ahafahana mampitombo ny fahombiazan'ny famokarana.
Faritra miasa (W * L): 1600mm * 1000mm (62.9 "* 39.3")
Herin'ny Laser: 100W / 150W / 300W
CO2 Flatbed Laser Cutter 160L
Miaraka amin'ny endrika fanapahana 1600mm * 3000mm, ny Flatbed Laser Cutter 160L anay dia afaka manampy anao hanapaka lamina famolavolana endrika lehibe. Ny famolavolana ny fandefasana Rack & Pinion dia manome antoka ny kalitao sy ny fahamarinan-toerana amin'ny dingana maharitra. Na manapaka lamba somary maivana ianao na lamba teknika matanjaka toa ny Cordura sy ny Fiber Glass, ny milina fanapahana laser antsika dia afaka miatrika olana amin'ny fanapahana mora foana.
Faritra miasa (W * L): 1600mm * 3000mm (62.9 '' * 118 '')
CO2 Flatbed Laser Cutter 140
Ny Cutter Laserbed an'ny MimoWork dia ny mpanamboatra laser amin'ny haben'ny mpiasa amin'ny sehatry ny dokam-barotra sy ny fanomezana. Miaraka amin'ny fampiasam-bola kely dia azonao atao ny manapaka sy manisy sokitra akora mafy orina ary manomboka ny asan'ny atrikasa ataonao mba hanaovana akrilika sy hazo toy ny piozila hazo sy fanomezana souvenir akrilika. Ny volavola mihazakazaka eo alohany sy any aoriana dia mamela azy hampiasa fitaovana fanodinana izay lava kokoa noho ny faritra fanapahana.
Faritra miasa (W * L): 1400mm * 900mm (55.1 "* 35.4")
Herin'ny Laser: 100W / 150W
CO2 Flatbed Laser Cutter 130L
Ho an'ny fitaovana lehibe endrika, ny Flatbed Laser Cutter 130L no safidinao tsara indrindra. Na takelaka akrilika ivelany na fanaka vita amin'ny hazo, dia mila milina CNC ny iray mba hamoahana vokatra avo lenta sy avo lenta. Ny rafitra mekanika mandroso indrindra ananantsika dia mamela ny lohan'ny gantry laser hifindra amin'ny hafainganam-pandeha avo indrindra rehefa mitondra fantsom-by laser mahery eo an-tampony. Miaraka amin'ny safidinao fanavaozana ny Head Laser Mixed dia azonao atao ny manapaka ireo fitaovana vy sy tsy vy amin'ny milina iray.
Faritra miasa (W * L): 1300mm * 2500mm (51 "* 98.4")
Herin'ny Laser: 150W / 300W / 500W
Izahay dia mpiara-miasa laser manokana ho anao!
Mifandraisa aminay raha misy fanontaniana, fifampidinihana na fizarana vaovao
Mpamatsy Laser azo atokisana anao
No.840 Chengliu Hwy, Distrikan'i Jiading, Shanghai, Sina
Topimaso momba ny fampiharana